नेपालमा निःशुल्क शिक्षा : विपक्षमा एक बहस | EduKhabar
नेपालको संविधान २०७२ ले आधारभूत तहको (कक्षा १– ८) शिक्षा निःशुल्क तथा अनिवार्य र माध्यमिक तहको (कक्षा ९–१२) शिक्षा निःशुल्क हुने व्यवस्था गरेको छ । त्यसै अनुसारका नीति, नियम र कानूनहरू बनेका र बन्ने प्रक्रियामा छन् । यसरी औपचारिक र आधिकारिक रूपमा नेपालमा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क छ । सार्वजनिक शिक्षा अर्थात् सामुदायिक विद्यालयमा यो व्यवस्था धेरै हदसम्म कार्यान्वयनमा छ ।
अब आयो सामुदायिक विद्यालयले लिने विभिन्न शुल्क या सहयोगको सवाल र त्यसको औचित्यको कुरा । विशेष गरी शैक्षिक सत्रको सुरूतिर उठ्ने शुल्क सम्बन्धी प्रसङ्ग, विवाद या उजुरीको विषय । एकातिर कुनै पनि शिर्षकमा शुल्क र सहयोग लिन पाइँदैन भन्नेहरू छन् । अर्कोतिर अभिभावकको सहमति र असहमतिमा शुल्क लिएर सदुपयोग र दुरूपयोग गर्नेहरू छन् । निःशुल्क शिक्षाको आशय कुनै पनि नागरिकलाई शुल्कको कारणले, पाठ्यपुस्तकको कारणले, शैक्षिक सामग्रीको कारणले शिक्षा पाउने अधिकारबाट वञ्चित हुन नपरोस् भन्ने हुनुपर्दछ । त्यस्तै कम्तिमा विद्यालय शिक्षा सम्मको शुल्क र लगानी सम्बन्धी बोझ र तनाव विद्यार्थी र परिवारमा नपरोस् भन्ने होला ।
एकातर्फ हामी अन्तराष्ट्रिय मापदण्ड र प्रचलन अनुसार निःशुल्क शिक्षाको अभ्यास गर्न खोजीरहेका छौं । अर्को तर्फ शिक्षामा पर्याप्त लगानी र भइरहेका सबै प्रकारका लगानीको सही व्यवस्थापन गर्न नसक्दा त्यसका विभिन्न नकारात्मक प्रभावहरू देखिइरहेका छन् । उदाहरणको लागि निःशुल्क वितरण गरिने जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेडबाट मुद्रित पाठ्यपुस्तक पहिलो दिनमै पुराना लाग्छन् । प्रयोग योग्य लाग्दैनन् । टिकाउ छैनन् । बालमैत्रीका कुरा त गर्नै परेन । बच्चालाई नयाँ किताव हात पर्दा नै निराश तथा निरूत्साहित तुल्याउने काम भएको छ । त्यसैगरी विद्यालयमा आवश्यक अन्य साधन, स्रोत तथा शैक्षिक सामग्रीको उपलब्धता र गुणस्तरको अवस्था पनि त्यस्तै छ ।
त्यति मात्र नभै निःशुल्क शिक्षाले आफ्नो समुदायमा रहेको (आफ्नै) विद्यालयको सञ्चालन र व्यवस्थापनमा अभिभावकको भूमिका तथा सक्रियतालाई पनि साँघुरो तुल्याइदिएको छ । घटाइदिएको छ । शिक्षाको महत्व र महिमालाई पनि पातलो बनाउँदै लगेको छ । राज्यको स्रोत कसरी बढि हात पार्ने भन्ने अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढाइदिएको छ । यसबाट राज्यको आर्थिक स्रोतको धेरै असमान वितरण तथा दुरूपयोग भएका घटनाहरू पनि यथेष्ठ छन् ।
अर्कोतर्फ कतिपय सामुदायिक विद्यालयहरू जुर्मुराउने प्रक्रियामा देखिन्छन् । केही त व्यवस्थापन र गुणस्तरको हिसावले अगाडि नै बढिसकेका छन् । यी विद्यालयका धेरै राम्रा गुणहरू छन् । ती मध्ये एउटा गुण अभिभावक सहयोग या शुल्क लिनु हो । जति पनि केही गरिरहेका, अभिभावकको विश्वास जितिरहेका विद्यालयहरू छन् ती सबैले धेर थोर शुल्क लिइरहेकै छन् । समुदायको माया र आकर्षण पनि जितेकै छन् । त्यती विवादमा पनि छैनन् ।
विद्यालय समुदायको हो । समुदायले नै सञ्चालन गर्दछ । व्यवस्थापन समितिका माध्यमबाट । समुदायले नै अनुगमन तथा रेखदेख गर्छ । शिक्षक अभिभावक सँघका माध्यमबाट । यो व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा व्यवहारमा आउन नसेको अवस्थामा यसलाई प्रभावकारी बनाउने भन्दा अर्को विकल्प छैन । बाहिरबाट हुने प्रशासनिक अनुगमन निरीक्षणले यी कार्य गर्न सकेन । र सक्दा पनि सक्दैन । यस्ता निरीक्षणले केही प्रशासनिक केही भौतिक अवस्था तथा व्यवस्था सम्बन्धी प्रभाव पार्ला । भै रहेको अवस्थाको मूल्यांकन गर्ला । स्तरीकरण गर्ला । स्रोतको वितरणमा भूमिका खेल्ला । हौसला प्रदान गर्ला । मार्गदर्शन गर्ला ।
राज्यले जे सक्छ दिन्छ । दिएकै छ । अभिभावकहरूको छलफलबाट मासिक र चौमासिक र वार्षिक यति रकम संकलन गरौं र यो विधि अनुसार यो यो प्रयोजनमा खर्च गरौं भन्ने निर्णय हुन्छ । कोषको उपयोगमा तल माथि हुन्छ कि हेर्ने व्यवस्थापन समिति छ, अभिभावक सँघ छ । सिँगो समुदाय छ । अब गाउँ र नगरपालिकाले हेरोस् । जिल्ला, प्रदेश या सरकारले हेरोस् भनेर हुँदैन । यो मोडेल सफल भएन । हुन पनि सक्दैन ।
महङ्गी धेरै छ । मानिसले धेरै कुरामा खर्च गरी रहेको छ । विलासितामा पनि । वैकल्पिक खान पिनमा पनि । त विद्यालयमा केही रकम संकलन गरी आफ्नै सन्तानको गुणस्तरमा, विकासमा लगाउन किन दाँतबाट पसिना आउनुपर्यो ?
समुदायको साझा सम्पत्तीलाई आकर्षक, स्रोतपूर्ण तथा सम्पन्न बनाउन किन सानो चित्त गर्नुपर्ने ?
कसैले पनि नतिर्ने ठाउँमा तिर्नु पर्यो भन्ने चिन्ता हो, सबैले तिरे पछि खुशीसाथ तिर्ने मान्छे पनि छन् । केही तिर्न नपरेपछि, केही लिन सकिन्छ कि भन्नेहरू पनि छन् । विद्यालयको धारामा कहिले टुटी हाल्लान् र त्यसलाई निकालौंला र घर लैजाउँला भन्नेहरू पनि छन् । विद्यालयको कक्षाकोठामा भएको वेञ्च कहिले हल्लेला र दाउरा बनाउँला भन्नेहरू र छानाको टिन कहिले हल्लेला र घरको गोठमा राख्न लैजाउँला भन्नेहरू पनि छन् । यस्तो सोचले विद्यालयको शैक्षिक भौतिक प्रगति कसरी होस् ?
त्यसैले समुदायले विद्यालयको अपनत्व लिने र दिने मोडलमा जानुपर्छ । विद्यालय कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने विषयमा समुदायले नै अग्रसरता लिनु पर्दछ । सरकारी विद्यालय हो । सरकारले नै व्यवस्थापन सञ्चालन गरोस् भनेर छाड्ने हो भने त्यसको मारमा पर्ने हाम्रै सन्तती हुन् । हाम्रै समाज हो । हामी नै हौं । जे कुरामा महत्व छ, त्यसैमा लगानी गरिन्छ । जहाँ लगानी भएको छ त्यसको महत्व बुझिन्छ । हाम्रो सामाजिक, आर्थिक अवस्थामा शिक्षामा लगानी नगर्दा शिक्षाको महत्व या लालसा पनि घटेको छ । यसर्थ धेरै कुरामा खर्च छ भने शिक्षामा लगानी गरेर शिक्षाको महत्वलाई किन नबढाउने ? गुणस्तरलाई किन नसुधार्ने ?
जुन विद्यालयले शुल्क लिएर सही व्यवस्थापन गरेका छन् ति सफल छन् । सरकारका मान्छेहरू नीति नियमले बाँधिएका छन् । शुल्कको पक्षमा तैं चुप मैं चुप छन् । त्यस्तै शुल्क र सहयोग लिने सफल विद्यालय उपर सबै मौन छन् । सन्तुष्ट पनि छन् । त अन्य विद्यालयमा पनि आवश्यक अतिरिक्त रकम संकलन गरी शिक्षाको गुणस्तर किन नउकास्ने ? सहयोग शुल्कको दर तथा उपयोग सम्बन्धमा मापदण्ड किन नबनाउने ?
अब विपन्नलाई के कसरी गुणस्तरीय शिक्षा दिने त ? यस्ता आर्थिक हिसावले कमजोर लक्षित समुहका विद्यार्थीलाई सम्बन्धित विद्यालयले मापदण्ड तथा विधि तोकी सहयोग शुल्क छुट दिने व्यवस्था मिलाउनु पर्छ । अभिभावककै छुट्टै समुह, विव्यस वा अभिभावक सँघका प्रतिनिधिले टुङ्याउन सक्छन् । आवश्यक परेमा वडा वा स्थानीय तहसँगको समन्वयमा संयन्त्र बनाउन सकिन्छ । यसरी विपन्न समुदायलाई सेवा दिँदा समस्या परेमा, न्यूनतम मापदण्डका आधारमा विद्यालय सञ्चालनमा समस्या भएमा स्थानीय तहसँग सहयोग माग्ने र पाउने व्यवस्था सहजै गर्न सकिन्छ ।
यसरी अभिभावक सहयोग शुल्कलाई बोझ, बाध्यता तथा गैर कानुनी मात्र नसोची अभिभावक सहभागिताको दृष्टिकोणबाट किन नहेर्ने ?
जुन विद्यालयले अभिभावक सहयोग शुल्क लिएका छैनन् अधिकांश असफल छन् । वेवारिसे छन् । यो कुरा अभिभावकहरूलाई बुझाएर सामुदायिक विद्यालयलाई स्रोतपूर्ण बनाउँदै शैक्षिक गुणस्तर तर्फ लाग्नु अपरिहार्य भएको छ ।
ओझा गलकोट नगरपालिका बागलुङका नगर शिक्षा अधिकृत हुन् ।
प्रकाशित मिति २०७५ श्रावण ९ ,बुधबार
कृष्ण बहादुर पुन 11 months ago
नेपाल वाद (ism) ले खाएको देश हो। यो निशुल्क शिक्षावाद त्यस्तै खराव चिज हो। यसले अहिलेसम्म लाखौँ बालबालिकाको भविष्यलाई बेवारिसे हालतमा पुर्याइ सकेको छ। किनकी निशुल्कले गर्दा बनेको बेवारिसे स्कुलले गर्दा। बालबालिकाको क्षमता फक्रिनै पाएन नि। शुल्क संबन्धी अर्को पक्ष हो-- शुल्कले बिपन्न अवस्थामा रहेका वालवालिकाहरूलाई स्कुल भर्ना हुनबाट रोक्न हुदैन। शुल्कले त स्कुलहरूलाई बेवारिसे हुनबाट बचाउने हो र शैक्षिक सामग्री उपलब्ध गराउने हो, शिक्षणको गुणस्तर बढाउने हो। त्यसैले शुल्कलाई सकेसम्म कम बोझिलो हुने गरि र साँच्चिकै विपन्न परिवारलाई छुट सम्म दिनुपर्दछ र सो को पुर्तिको लागि ओझा सरले भनेझैँ स्थानिय निकायसँग आर्थिक सहयोगको समन्वय गर्नुपर्दछ। विपन्न परिवारलाई शुल्कको दर कम पनि गर्न सकिन्छ। अहिलेका अभिभावक निशुल्क बेवारिसे स्कुल शिक्षा भन्दा सशुल्क क्वालिटी शिक्षा चाहन्छन् र हुनुपर्ने पनि त्यही हो तर विपन्न बालबालिकाहरूले शुल्कको कारण बाहिरिन नपर्ने शर्तमा। शुल्कले गुणस्तर बढ्यो भने त्यसको लाभ विपन्न बालबालिकालाई पनि छ, पुग्ने बालबालिकालाई पनि छ। तर निशुल्कले गुणस्तरहिन भएमा कसैलाई पनि लाभ छैन। सबैलाई घाटा छ। तर अति विपन्नको समाधान गर्नै पर्छ। त्यो संभव छ। किनकी अति बिपन्नको संख्या सानो नै हुन्छ। खासमा बालबालिका शिक्षण शुल्कले भन्दा अभ्यास पुस्तक र खाजा खर्चले बढी पिडित बन्न पुग्छन्। किनकी यो खर्च शुल्क भन्दा तिनचार गुना बढी हुन्छ। त्यसैले हल्का शुल्क लिदामा स्कुलले बढी जिम्मेवरी पुर्वक शिक्षा दिन सक्छ भने हल्का शुल्क लिनु उचित छ। तर विपन्न बालबालिकाले पनि पढ्न पाउने गरि शर्तमा हुनुपर्दछ। शुल्कको पूरा सदुपयोग र परिणाममुखी हुनुपर्नेमा पूरा रेखदेख भने हुनुपर्दछ।शुल्कलाई कहिल्यै पनि लाभको अर्थमा लिनुहुदैन। यो त लागत मूल्य मात्र हो। कृष्ण ब पुन स्थानिय शिक्षा विश्लेषक, तंग्राम, काठेखोला गा पा ४, बागलुङ।
dilli11 months ago
sahi kura garnuvayo sir le
Tika Bhujel11 months ago
प्रकाश सरको उपर्युक्त लेख यथार्थ परक र समय सान्दर्भिक रहेको छ । सरकारले आधारभूत तहको शिक्षा अनिवार्य र मावि तहको शिक्षा निशुल्क भनेपनि त्यस्कोलागि चाहिने आवश्यक पूर्वाधारहरुको व्यवस्थापन पूर्णरूपमा गर्न नसकेको वर्तमान अवस्थामा विद्यालयका सरोकारवालाहरुको आपसी समझदारीमा आफ्नै बालबालिकाहरुको शैक्षिक गुणस्तर वृद्धिका लागि केही लगानी गरि विद्यालय संचालनको दायित्व आफ्नो काधमा लिनुलाई अन्यथा मान्नु हुँदैन ।